रामचन्द्र पौडेलेको घोषणाले बालुवाटार मुस्कुरायो ! - Rising Dainik
रामचन्द्र पौडेलेको घोषणाले बालुवाटार मुस्कुरायो !
March 27, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on रामचन्द्र पौडेलेको घोषणाले बालुवाटार मुस्कुरायो !
काठमाडौँ / नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिमाथि चौतर्फीरुपममा आ’क्रमण भइरहेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई बचाउन प्रजातान्त्रिक दलबीच आपसी एकता अपरिहार्य रहेकामा जोड दिएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले सङ्घीय लोकतन्त्र र जनताको बलिदानबाट निर्माण गरिएको संविधान जोगाउनु नै अहिले महत्वपूर्ण कार्य रहेको बताए ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले वर्तमान अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्रलाई भत्काउने विभिन्न किसिमका ष’ड्यन्त्र भइरहेकाले त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउन सबै दललाई आग्रह गरे ।
उनले सबै राजनीतिक दलबीच आपसी सहमतिमा सरकारको विकल्प खोज्ने गरी छलफल एवं गृहकार्य जारी रहेको औंल्याए ।
नेता पौडेलले आफ्नो पार्टीबाट वर्तमान सरकारवि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने घोषणा समेत गरेका छन् ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूवि’रुद्ध आउनसक्ने अविश्वास प्रस्ताव वा विश्वासको मत लिन जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० सँग सहकार्यको कसरत गरेका छन्।
आफूवि’रुद्ध प्रतिनिधिसभाभित्र गठबन्धन हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले अघि सारेका मु’द्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहित सहकार्यका लागि प्रयास गरेका हुन्।
ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार गठन नहोस् भन्ने चाहनास्वरूप खेलेको खेल सफल भए मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ। ओलीले आश्वासन दिए पनि जसपाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न त्यति सजिलो छैन।
जसपाका सबै माग पूरा गर्दा प्रधानमन्त्री विवादमा तानिनेछन्। जसपाले राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा पनि क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेको छ।
मुलुकलाई निकास दिन जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहनुपर्ने यो पार्टी विभिन्न माग राखेर सत्ताको मोलमोलाइमा लाग्दा निकास निस्कन सकेको छैन। जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको बताए।
उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि सकारात्मक छलफल भइरहेको बताए। जसपाका केही नेताको झुकाव प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ। जसपाभित्रै डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छैन।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।
माधव नेपाल र भीम रावललाई पार्टीको सदस्यबाटै नि’लम्बन !
मन्त्रीबाट हट्नै बित्तिकै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आएपछि बीना मगरले दिइन् सबैलाई चकित पार्ने यस्तो प्रतिक्रिया !
को’रोना स’क्रमितको संख्या १ लाख लाघेलगत्तै सरकारको क’डा चे’तावनी, अटेरी गर्नेमाथि हुनेछ यस्तो कठोर स’जाय
बधाई छ ! काठमाडौँ उपत्यकावासीले आज देखि यस्तो सुविधा पाउने‌, पढनुहोस पुरा समाचार –
March 29, 2021 Ramash Kunwar